XOG MUHIIM AH+AKHRISO: Maxaa dhexmaray Wada hadalo dhexmara Jawaari & Mudanayaasha Nairobi ku shiray ee Mooshinka waday? | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
XOG MUHIIM AH+AKHRISO: Maxaa dhexmaray Wada hadalo dhexmara Jawaari & Mudanayaasha Nairobi ku shiray ee Mooshinka waday?
NAIROBI(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey oo Warsidaha Puntlandtimes ka helayo magaalada Muqdisho ayaa daaha ka rogaya in ay natiijo la`aan ku soo dhamaadeen shirar kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay u socday guddoonka baarlamaanka Soomaaliya & Xildhibaano gaaraya 110 Mudane, oo shaaca ka qaaday in ay u midobeen sidii ay ula xisaabtami lahaayeen Xukuumada Faderaalka.
Wada hadaladaas ayaa 5 jeer oo kala duwan is arag guud ah uu dhacay, waxaana waxyaabaha laga wada hadlay ugu muhiimsanaa in aan la keenin waqtigan Mooshin ka dhan ah Xukuumadda Soomaaliya.
Xildhibaanadan waxay u gudbiyeen Gudoomiyaha baarlamaanka Prof, Maxamed Sh Cismaan Jawaari in ay xaq u leeyihiin in ay la xisaabtamaan Madaxda dawladda oo ay masuuliyad ka saara tahay.
Guddiga gaar ah oo ay iska dhex doorteen Xildhibaanadan ayaa u sheegay Afhayeenka baarlamaanka in ujeedadoodu tahay in laga qeyb noqdo hour-socodka siyaasadeed ee dalka, isla markaasna la saxo khaladaadka ay galayaan Hay’adda Fulinta.
Waxay si toos ah u cadeeyeen in ay xaq u leeyihiin in wixii khaldan ay soo jeedinta baarlamaanka ku saxaan,taasna aan laga dhigi Karin talaabo shaki lagu qalinayo Qaranimada Soomaaliya, ee ay tahay arrin waajib ah.
In Shacabka laga horkeeno ayay ku sifeeyeen in ay tahay arrin aan la mahdin doonin, waxayna ku hanjabeen in haddii talaabadaas laysku dayo ay halis ku galinaysa in ay sii shaqeeyaan Xaafiisyada Madaxda ugu sareysa ee dawladda Soomaaliya.
Dood adag oo dhexmaray dhinacyadan ayaa la xaqiijiyey in ay natiijo la`aan ilaa hadda ku soo dhamaadeen, isla markaasna ay jiraan dadaalo kale oo ku aadan in ay Xildhibaanadan midowgooda ka laabtaan.